रोचक Archives - Page 18 of 18 - Daily Lokmandu
शिव मन्दिरलाई मर्मत गर्दा गर्दै यस्तो चिज भेटियो देखेर सबै चकित
मानिसको जीवनमा जब समस्या देखा पर्न थाल्छ अनि उसले अनेक देवी देवताहरूको पूजा पाठ, भाकल आदि गर्न थाल्छ, मन्दिर धाउँछ, जप, तप, हवन, दान, धर्म आदि अनेक उपाय गर्नथाल्छ । समस्या समाधान होस् र जीवन शान्तिपूर्ण होस् भनेर यस्तो काम गरिन्छ । समस्याबाट छुटकारा पाउन ज्योतिष तथा धामीझाँक्रीकहाँ पनि पुग्छ । शास्त्रीय दृष्टिले योग्य एवं गणितको राम्रो दख्खल भएका ज्योतिषको परामर्शले समस्या ठीक हुनसक्ला तर गलत व्यक्तिको चंगुलमा फस्यो भने पैसा र समयको बर्बादी सिवाय केही हुँदैन । उसो भए के गर्ने त ? प्रश्न उब्जनु स्वभाविक छ । उत्तर एउटै छ- मानिस भगवान् शिवको शरण पर्‍यो भने उसले अन्यत्र कतै जानु पर्दैन । शिवसँग छ हरेक समस्याको समाधान । यसका लागि आवश्यक पर्छ साँचो श्रद्धा, विश्वास एवं भक्ति । भगवान् शिव समस्त धर्म-सम्प्रदाय, तन्त्रमन्त्र एवं ज्योतिषका जनक हुन् । शिवलाई प्रसन्न पार्न सजिलो पनि छ । उन
एउटा मोबाइलको फोन नम्बर अर्कोमा एकै मिनेटमा सार्न ? सिक्नुहोस् सजिला पाँच तरिका -सेयर गरौ
काठमाडौ । एउटा मोबाइलमा भएको फोन नम्बर अर्कोमा सार्नुपर्ने धेरैलाई परिरहेको हुन्छ । प्रायः नयाँ मोबाइल किन्दा पुरानो मोबाइलको नम्बर सार्नुपर्ने हुन्छ । यो अवस्थामा एक–एक नम्बर गर्दै फेरि टाइप गर्नुपर्ने झन्झट नै धेरैजसोले स्विकारेको पाइन्छ । यो निकै झूर तरिका हो । हजारौं नम्बर यसरी एउटा मोबाइलबाट अर्कोमा सार्न कम्ता मुस्किल पर्दैन । तर, एउटा मोबाइलमा राखिएका नम्बर तुरुन्तै अर्कोमा पठाउन सकिने सजिला तरिका पनि छन् । सिकिराख्नुहोस्, उपयोगी हुन्छ गुगल कन्ट्याक्टबाट : तपाईं एन्ड्रोइड स्मार्टफोन प्रयोग गर्नुहुन्छ भने सबै फोन नम्बर गुगल कन्ट्याक्ट्स सेभ हुन्छ । यसलाई तपाईंको जिमेल आइडीसँग सिन्क गरिदिनुहोस् । अब, नयाँ फोनमा जिमेल आइडी ओपन गरेपछि सबै फोन नम्बर उपलब्ध हुन्छ । तपाईंलाई जिमेल लगइन गर्न जति समय लाग्छ, उति समयमा सबै फोन नम्बर आउँछ ।ब्लूटुथको माध्यमबाट : मोबाइलमा रहेका फोन नम्बर ब्
भाग्यमानी मानिससँग मात्र हुने यी ६गुणहरू के तपाईसग छन?हेर्नुहोस के के हुन ती गुणहरू
सुख र दुःख आउँछ जान्छ । त्यसैले भन्छन नि कुनै पनि मानिस कहिल्यै पनि सुखी वा दुखी भईराख्दैन । यसै प्रसंगलाई लिएर महाभारतमा पनि विदुरले भनेका छन्, यदी कुनै मासिनको जीवनमा यी ६ कुराहरु प्राप्त छन भने उ कहिल्यै पनि दुःखी हुँदैन । यो कुरा महाभारतको उद्योग पर्वमा उल्लेख छ ।श्लोक यसप्रकार छ स् अर्थाथमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, वश्यश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या षट् जीव लोकेषु सुखानि राजन् ।। अर्थ स् धन, निरोगी शरीर, सुन्दर पत्नी, मीठो बोल्ने, आज्ञाकारी पुत्र र धनप्राप्त गर्ने विद्या यी ६ कुराले मानिसलाई सुख दिन्छ । ￼ १. धन:सुखी जीवनको लागि धन सम्पत्ति हुनु आवश्यक छ । बिना धनको न नाम रहन्छ, न मान सम्मान नै मिल्छ । परिवारको पालन पोषण गर्नको लागि धनसम्पत्ति हुनु आवश्यक छ । आजको समयमा शिक्षा प्राप्त गर्नको लागि पनि धनको जरुरी छ । धन बिना कुनै रोगको उपचार सम्भव छैन । वृद्धावस्थाम
Jan272019 by read colorNo Comments
दिमाग तेज बनाउनको लागी भगवान गणेशलाई चढाउनुस यी खास चिज !
यदि तपाइको कुनै पनि काम हुँदा हुँदै रोकिएको छ भने वा लामो समयदेखि कुनै शुभ काम भएको छैन भने तपाइले भगवान गणेश लाई प्रशन्न गर्नपर्छ । मानिन्छ कि उहाको कृपाले घरमा शुभ कार्य हुन्छ। शिव पुत्रलाई खुशी बनाउनको लागी तपाइले कुनै मुस्किल उपाय गर्न जरुरत छैन। तपाई यी सजिलो उपायले पनि गजानन्दलाई प्रसन्न गर्न सक्नुहुन्छ। तर यसको लागी यो जरुरि छ कि यो उपायहरु सहि तरिकाले र भक्तिले गर्नपर्छ। १. दुबोले भगवान गणेशको पूजा गर्नाले उनि अधिक प्रसन्न हुन्छन्। किनकि दुबोमा अमृत हुन्छ। गणपति अथर्वशीर्षमा भनिएको छ कि जसले पनि दुबोले भगवान गणेशको पुजा गर्छ उ कुबेर समान हुन्छ। २. लड‍्डू भगवान गणेशको मनपर्ने भोग हो। गणपति अथर्वशीर्षको अनुसार जो भक्तले उनलाई मनपर्ने भोग अर्पित गर्छ, उनीहरुमा भगवान गणेशको कृपा सधै रहन्छ र मनोकामना पनि पुरा हुन्छ। शास्त्रमा लड्डूको तुलना ब्रह्मासँग गरिएको छ। ३. पंचामृतमा ए
काठमाडौं । उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक बिद्यालय संघ (हिसान) ले संचालन गर्ने २०७५ सालको कक्षा ११ र १२ को परीक्षा तालिका सार्वजनिक भएको छ । हिसानले बार्षिक रुपमा ११ र १२ को परीक्षा संचालन गर्दै आएको छ । यो वर्षको परिक्षा वि.सं. २०७५ फाल्गुन २२ गते देखि सुरु भएर चैंत्र महिनाको तीन गते सकिने भएको छ । परिक्षाको सुरुको दिन अर्थात फाल्गुन २२ गतेका दिन अनिवार्य अंग्रेजी विषयको परिक्षा संचालन गरिने हिसानले जानकारी दिएको छ । बच्चाहरूलाई मोबाइल दिनु कतिको घातक ? हरेक अभिभावकहरूले पूरा पढ्नु होस । काठमाडौं । कागेश्वरी मनहरा बस्दै आएकी रबिता केसी ३ वर्षीय छोराको हर्कतले वाक्क भएकी छन् । मोबाइल नभई खाना नखाने, गृहकार्य नगर्ने र परिआए रातभरि मोबाइलमा भिडियो हेरेर बसिदिने । भर्खरै ३ वर्षको छोरालाई मोबाइल को त्यस्तो लत लागेपछि कुुन बावुआमालाई पीर नलाग्ला ? रबिता त यस्तो समस्याको प्रतिनिधि पात्रमात्
एजेन्सी । हामी तपाई पाठकलाई संसारकै सबैभन्दा ठुलो हिन्दु मन्दिरका बारेमा जानकारी दिँदैछौ । जसको माघ महिनामा अति नै महत्व छ । यो मन्दिर कम्बोडियामा रहेको छ । कम्बोडियाको ठुलो क्षेत्रमा फैलिएको यो मन्दिरको निर्माण सम्राट सुर्यवर्मन द्वितीयले आफ्नो शासनकालको इश्बी सम्बत १११२–५३ मा यस मन्दिरको निर्माण गरेका हुन् । यसमा विश्वभरीकै हिन्दु धर्मालम्बीहरु पुग्ने गर्दछन् । माघ महिनामा पुगेर अधिकांशले आफ्ना सामाजीक सञ्जालमा पोष्ट गर्ने पछिल्लो चलन बनेको छ । तपाईलेपनि सेयर गरे अद्भुत मनोकांक्षा पुरा हुनेछ । यो कम्बोडियाको मिकांग नदिको किनारमा रहेको सिमरिप शहरमा छ । सयौ वर्ग माइलमा फैलिएको यस मन्दिर क्षेत्रमा भगवान शिव तथा विष्णु को बिशाल मन्दिरहरु रहेका छन् । यो महिना शिवको महिमा भएकाले अधिक मानिसहरु दर्शन गर्न पुग्दछन् । मन्दिर खमेर वास्तुकला को उच्च परम्परागत शैलीको शिखरमा रहेको छ। कम्बोडियाको
खुसीको खबर : अब देखि सजिलै न्युजिल्यान्डमा यसरी जान सक्छन नेपाली
आफ्नो दुर्भाग्यलाई सौभाग्यमा परिवर्तन गर्न अपनाउनुस् यी ५ तरिका !
अन्ततः नेपालमा बन्द हुने नै भयो फेसबुक, यूट्युब, इंस्टाग्राम, ट्वीटर लगाएतका सामाजिक संजाल, ओली सरकारले गर्यो खतरनाक निर्णय
यो हो संसारकै ठुलो हिन्दु मन्दिर : फाल्गुण महिनामा सेयर गरेर अद्भुत लाभ लिनुहोस्
बिहान उठ्ने बित्तिकै दैनिक एक गिलास मनतातो पानी पिउँदा तपाईंको शरिरमा हुनेछ यस्तो
बिहिबारमा जन्मिएका मानिसको भाग्य कस्तो हुन्छ ? – जान्नुहोस (3,510)
शारिरिक सम्पर्क गर्दा महिलाको योनीमा कण्डम अड्किएमा यी ५ तरिका अपनाएर निकाल्नुहोस् ! (2,662)
म भित्र दुःखका काँडाहरू थुप्रै छन् जसले घोचेर म पटक–पटक रोएकी छु : हिमानी शाह (1,466)
चर्चित भारतीय गायक सोनु निगम काठमाडौंस्थित नर्भिक अस्पताल भर्ना (1,190)
ष्ट्रेलिया पुगेका नर्सहरु रुँदै भन्छन, ‘पैसापनि गयो, समयपनि गयो हामी बर्बाद भयौं’ (977)
बिहान कहिल्यै नगर्नुस् यी ५ काम नत्र जिवन भर अशुभ दुख र अभाव हुनेछ (934)
४८ लाख खर्च गरेर क्यानडा जान बिदाइको माला पहिरिएर घरबाट निस्केकी युवती एयरपाेर्टबाटै फिर्ता (888)
अन्ततः नेपालमा बन्द हुने नै भयो फेसबुक, यूट्युब, इंस्टाग्राम, ट्वीटर लगाएतका सामाजिक संजाल,… (764)
सामाजिक परिचालिका सिर्जना गुरुङको कहालीलाग्दो मृत्यु (38,192)
ताप्लेजुङबाट रुहाउने खबर : २२ वर्षीया सिर्जनाको घटनास्थल मै ज्यान गयो (22,108)
जस्ताेसुकै बिजी भएपनि एकपटक अवश्य पढाै !! नपढे तपाईलाई पछुताे हुनेछ !! (19,941)
चर्चित भारतीय गायक सोनु निगम काठमाडौंस्थित नर्भिक अस्पताल भर्ना (17,255)
भारतको कश्मिरमा फेरी भयो घमासान लडाइँ, ७ भारतीय सैनिकको मृत्यु, कैयौं घाइते (15,359)
फागुन ८ गते विप्लवद्वारा बन्दको घोषणा ! हेर्नुहोस (विज्ञप्ति सहित) (15,237)
१५ बर्से युवकले गर्लफ्रेन्ड गर्भवती भएको कुरा मम्मीलाइ सुनाउदा यी युवकले खाए मम्मीको राम… (13,391)
सशस्त्र प्रहरी बलबाट १६ वर्ष पछि अवकाश जाँदा न त २ रुपैयाँको टिका न त १०० रुपैयाँको फुलको… (11,437)
© Copyright 2016–2019 Daily Lokmandu. All rights reserved.